(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/12/2020)
Ikomkhulu Italian umthendeleko ukuba amehlo. Ukusuka Amanyathelo Spanish ukuya trevi Fountain, phantse akukho ndawo awuzukubethwa ngu izakhiwo omangalisayo. Ukuba oko akwanelanga, ukutya kubalulekile slavering phezu. luhamba ipasta tshama kunye gelato entsha kwaye mozzarella inyathi ufikile ngqo ukusuka kwifama.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Uhambo lokugqibela loLoliwe lwaseYurophu kwabaqalayo” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-trip-beginners%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Imini yohambo TrainJourny TrainsInEurope TravelForBeginners TripForBeginners TripsInEurope